Global Voices teny Malagasy » Angola: mpanao gazety nisy namono: Famoretana sa herisetra an-tanàn-dehibe? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Oktobra 2010 5:29 GMT 1	 · Mpanoratra Clara Onofre Nandika (en) i Janet Gunter, miora
Sokajy: Afrika Mainty, Angola, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Zon'olombelona
Tamin'ny 5 Septambra dia namoy ny ainy teo an-tanan'olon-tsy fantatra ilay mpanao gazety Albert Graves Chakussanga izay tsy nisalasala akory nitifitra azy tao ivelan'ny trano fonenany, tany an-tanànan'i Viana ao Luanda. Araka ny voalazan'ny Reporters without Borders (mpanangom-baovao tsy voafetran'ny sisintany) , novonoina avy tany aoriana tamin'ny alalan'ny bala tsy re i Chukassanga. Tao an-trano ny rahavavy am-panambadian'ilay mpanao gazety, ary tsy nahamarika na inona na inona. Mbola tsy mazava ny anton'ilay famonoana. Tsy natao nandalo fotsiny ihany anefa izany tany amin'ny tontolon'ny bilaogy Angolana.
Ao amin'ilay bilaogy Pensar e Falar Angola  (Fiheverana sy fitenenana Angola) [pt] vakio ity manaraka ity.
Araka ny voasoratra tao amin'ilay bilaogy  ihany koa,
Nanana mpihaino marobe i Chakussanga tany Ovimbundu, vondron'ny ankamaroan'ireo foko Angoley avy any amin'ny faritra Atsimon'ny nosy, ny fototr'ilay fanohanana ny hetsik'ireo mpanohitra taloha UNITA , araka ireo gazety any an-toerana. Nitsangana tamin'ny Desambra 2006 ny Rádio Despertar tao anatin'ilay fifanaraham-pandriampahalemana nataon'ny ankolafy nitondra MPLA  sy ny UNITA tamin'ny 2002.
Ao amin'ilay bilaogy Universal  [pt], ampitahaina amin'ilay trangan'ny famonoana an'ilay mpanao gazety Ricardo de Melo ity tranga ity. Na androany aza, mbola tsy voavaha ihany ity tranga ity.
Nanoratra mikasika ity mpanao gazety mahantra ity ihany koa ny tompon'ilay bilaogy Em Angola  [pt], tsy nanadino ny fanamarihany fa mbola risika ny fampiratiana ny asa fanaovan-gazety any Angola.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/10/26/10137/
 Reporters without Borders (mpanangom-baovao tsy voafetran'ny sisintany): http://en.rsf.org/angola-journalist-with-critical-radio-09-09-2010,38334.html